Ahoana ny fandrefesana ny ROI an'ny fampiharana finday | Martech Zone
Ahoana ny fandrefesana ny ROI an'ny fampiharana finday
Talata, Desambra 9, 2014 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ny orinasa mpiara-miasa izahay amin'ny famoronana rindranasa finday ho an'ny Android sy iOS dieny izao. Na dia nanao ny fampiharana azy manokana aza izahay, ity fampiharana manokana ity dia mitaky fifantohana bebe kokoa noho izay noeritreretinay. Heveriko fa maharitra ela kokoa ny fiasa amin'ny marketing, fandefasana ary famoahana ny rindranasa finday noho ny fotoana fampandrosoana ny fampiharana! Tena hanitsy ny fanantenana amin'ny asa toy izany isika amin'ny ho avy.
Ity fampiharana ity dia fampiharana soloina ho an'ny mpanjifa izay nanamboatra calculator ho an'ny mpanjifany - injeniera ny ankamaroany. Fampiharana tsy misy dikany izay manampy ny injeniera amin'ny fanaovana kajy isan-karazany an'arivony mora foana. Ny fampiharana tsy mivarotra na inona na inona ary tsy manao vidin'ny na inona na inona. Ny fampiharana dia hanomezana lanja ny mpanjifa fotsiny. Ny fampivelarana fitaovana toy izao mba hahamora ny asan'ny olona dia tetikady ara-barotra lehibe satria efa niverimberina ny resaka momba ny mpanjifa ka dia mijanona ao an-tsaina ianao rehefa mila ny vokatrao na serivisinao.
Amin'ny maha-soloina soloina, ny elanelana izay hitanay (ivelan'ny kajy tsy marina sasany) dia ny tsy fisian'ny fifampiraharahana amin'ny fampiharana finday eo amin'ny orinasa sy ny mpampiasa. Noho izany dia nanisy fampifandraisana tsotra sy fisehoana click-to-talk izahay, ary koa nanintona ireo horonantsary Youtube How-To sy ny bilaogin'izy ireo farany. Amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo feed ireo amin'ny mpampiasa, ny rindrambaiko finday izao dia manome vavahady iray nohatsaraina bebe kokoa hananganana famerenam-bola tsara kokoa ary angamba hahazo varotra mivantana amin'ny fampiasana aza.
Na mifantoka amin'ny fanentanana ny mpanjifa na ny mpiasa ianao, ity infographic ity dia mandrakotra ny fototra rehetra: mamaritra ny tanjonao, manombana ny vidiny, manendry KPI, ary mahatratra isa ROI amin'ny isa mangatsiaka sy mafy. Mihoatra lavitra ny paikady miaraka amin'ny fandrefesana sy ny fitoviana izay manaporofo fa tena miampy ny fivezivezena eo amin'ny orinasa. Jason Evans, SVP, fitantanana tetika sy fanavaozana
izany infographic avy any Kony mandehandeha ny mpivarotra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fikajiana ny Return on Investment amin'ny famolavolana rindranasa finday amin'ny alàlan'ny metodology NPV (Net Present Value). Ho fampahalalana bebe kokoa, aza hadino ny misintona ny Whitepaper an'i Kony Fandrefesana finday: fanombatombanana ny fahombiazan'ny tetikasan'ny findainao.
Tags: Sary torohayKonyfahazoana fampiharana findayvidin'ny fampiharana findaytanjon'ny fampiharana findayfampiharana finday kpistahan'ny fitazonana ny fampiharana findayfampiharana finday roifiverenan'ny fampiharana finday amin'ny fampiasam-bolafivoarana findayfitaomana findayfinday infographicfividianana firaka findaymobile tcosanda ankehitrinynpvfiverenana amin'ny fampiasam-bolatompon'ny vidiny tanteraka
Rant: Ny teny miafina momba ny teny miafina sy ny zavatra niainan'ny mpampiasa
Dec 10, 2014 ao amin'ny 10: PM PM
Tsara ny sary, misaotra ny asanao.